शालिकराम मृत्यु प्रकरण र रवी : न ‘देवत्वकरण’ न ‘राक्षसीकरण’- अदालत कुरौं – Nepal Japan
Thursday 13, August 2020
नेपाली समय : 11:21:31
जापानी समय : 02:36:31
शालिकराम मृत्यु प्रकरण र रवी : न ‘देवत्वकरण’ न ‘राक्षसीकरण’- अदालत कुरौं
16 August, 2019 15:25 | जन सरोकार | comments | 96600 Views
चितवनको कंगारु होटलमा मृत अवस्थामा भेटिएका पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको हत्या र आत्महत्या के हो भन्ने अनुसन्धान रिपोर्ट बाहिर आएको छैन तर यो घटनाले नाटकीय मोड लिएको छ ।
कुनै समय नेपालकै सबैभन्दा चर्चित कार्यक्रम “सिधा कुरा जनतासंग”मा आबद्ध शालिकरामको साथबाट बरामद भएको मोबाइलमा रेकर्ड भएको भिडियोलाई आधार बनाएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि कञ्चनपुरको एक वर्षअघिको घटनालाई पुनः स्मृतिमा ल्याइदिएको छ ।
गत वर्षको साउनमा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । सो हत्याको अनुसन्धानमा भएको त्रुटीले कञ्चनपुर तनावग्रस्त भयो, केहीको ज्यान गयो र अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लागेको छैन ।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गर्नुअघि रेकर्ड गरेको भनिएको भिडियोमा पत्रकार रवी लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की नाम गरेकी युवतीका कारण आफूले आत्महत्या गरेको बताएका छन् । तर, त्यो भिडियो आफैंमा कति आधिकारिक हो र त्यो भिडियो उनले खिचेका हुन् कि अरुले खिचेको हो भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
पुडासैनीले लामो भिडियो रेकर्ड गर्दै आफू न्यूज २४ को “सिधा कुरा जनतासंग” कार्यक्रमका सहयात्री हुँदाका नालीबेली लगाउँदै लामिछाने भ्रष्ट भएको आरोप लगाए र उनले दिएको मानसिक यातानाका कारण आफूले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको बताएका छन् । यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालहरुमा पक्ष र विरोधमा आवाज र धारणाहरु सार्वजनिक भैरहेको छ ।
रवी लामिछानेले केही समययतादेखि चलाइरहेको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासंग अत्यन्त लोकप्रिय मात्र हैन धेरैको ज्यान बचेको, धन सम्पत्ति बचेको अनि भ्रष्टहरुको सातो गएको सन्दर्भहरु स्मरण गर्दा अनि उनी बिरुद्ध पत्रकार आचारसंहिता बिरुद्धको अभियोग लाग्दाका सन्दर्भहरु हेर्दा यो घटनामा गम्भीर षड्यन्त्र भएको देखिने आधारहरु धेरै छन् ।
धेरैले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छ । भिडियोमा आवाज मात्र हैन दृश्यहरु पनि गम्भीर भएर हेर्ने हो भने त्यो कोठाभित्र शालिकराम मात्र हैन अरु पनि भएको देखिन्छ । शालिकरामले बोल्दै गर्दा बीच बीचमा किन भन्ने आवाज कसको आयो ? एउटै भिडियोमा लुगा फेरेको अनि खाटमा कहिले तकिया नहुने, कहिले हुने ? कसले राखिदियो तकिया । भिडियो शालिकरामले नै खिचेको हो भने । त्यस्तै अन्तमा उनले नमस्कार गर्दा मोबाइल कसले समातेको थियो ?
यी सामान्य दृश्यहरु हुन् । यी दृश्यलाई सम्पादन गरेर बनाउन पनि सकिन्छ । त्यसकारण भिडियोकै आधारमा अपराधी उम्कने गरी अनुसन्धान मोड्नु हुँदैन । सामान्य शंकाका आधारमा र सामान्य रुपमा लिंदा निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । प्रहरीले निर्मला प्रकरणलाई आधार बनाएर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।
अनुसन्धान अधिकारीहरु भिडियोलाई सूक्ष्म ढंगले हेर्नुस् । शालिकरामले होटलको कोठामा आत्महत्या गर्नुअघि खिचेको भनेको त्यो भिडियोमा अरु मानिसको आवाज कसरी आयो ? पलङमा कहिले तकिया हुने कहिले नहुने कसरी भयो ? भिडियो खिच्दै गरेको मानिसले तकिया कसरी ल्यायो ? यिनै केही दृश्यहरुले शालिकरामको मृत्युलाई थरु जटिल र रहस्यमय बनाएको छ । शालिकरामलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायबाट कुनै चुक हुँदैन भन्ने अपेक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।
अनुसन्धानको अर्को पाटो यो पनि हो कि पुडासैनीको मोबाइलको भिडियो सम्पादन गरेर संचारमाध्यममा सार्वजनिक गर्ने काम कसले गर्यो र किन गर्यो ? यति गम्भीर विषयको भिडियो प्रमाण मुद्दा फैसला भएर अपराध पुष्टि भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा कसको कुन स्वार्थले भिडियो सम्पादन गरेर सार्वजनिक गरियो ? यो पाटोलाई कसले अनुसन्धान गर्ने ?
अपराधशास्त्रमा मर्नुअघि मान्छेले झूठो बोल्दैन भनिन्छ र त्यसअघि उसले बोलेको कुरालाई प्रमाण मानिन्छ भने शालिकरामको २३ मिनेट लामो भिडियोलाई ११ मिनेटमा झारेर तीनजनाको मात्रै नाम सार्वजनिक गर्नुको रहस्य के हो ? किन पूरै भिडियो सार्वजनिक भएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । हो रवी लामिछाने ईश्वर हैनन्, उनलाई देवत्वकरण गरिरहनु जरुरी छैन । एउटा सचेत नागरिकका हिसाबले उनले देश र समाजको हितमा काम गरेको देखिएको हो र यसैले उनले लाखौं प्रशंसक कमाए ।
बिहिबार रवी, युवराज र अस्मितालाई पक्राउ गरी चितवन पुर्याइयो र शुक्रबार अदालतमा पेश गरी म्याद थप्ने तयारी भैरहेका बेला चितवनमा युवाहरुको ठूलो समूह रवीको पक्षमा नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरे । प्रहरीले हचुवाका भरमा पक्राउ गरेको आरोप उनीहरुको छ ।
एउटा सत्य के हो भने कसैले कसैलाई आरोप लगाउँदै प्रहरीमा उजुर दिन्छ भने प्रहरीको काम नै हो उसलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नु । यो त एउटा युवाको मृत्युको कुरा हो र यसमा अलिकति पनि चुक भयो भने यसले नराम्रो परिणती ल्याउँछ । प्रहरी पक्कै सचेत होला यस विषयमा । तर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने शालिकरामको मृत्युको कारण आत्महत्या नै हो कि यसको अर्को कारण पनि छ भन्ने पाटोबाट पनि अनुसन्धान गरिनुपर्दछ । यदि यसरी अनुसन्धान थालियो भने दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिनेछ ।
लामिछाने यो प्रकरणमा दोषी छन् वा छैनन् त्यो भोलिका दिनमा छुट्टिने कुरा हो । तर मरेको व्यक्तिले नाम किटानी गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । यसमा आम जनसमुदाय शान्त भएर अनुसन्धानलाई सघाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।
शालिकरामकले न्याय पाउनुपर्छ र उनले न्याय त्यतिबेला पाउनेछन् जब वास्तविकता पत्ता लाग्नेछ । उनको मृत्युको कारण र कारकलाई बजारको बहसको विषय नबनाएर प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । देशमा कानुन छ भने कानुन अनुसार दोषीले सजाय पाउँछ । हामी आफैं दोषी–निर्दोषी भनेर फैसला नगरौं ।
हो ! आशंका गर्ने ठाउँ छ । माफियाले घेरेको मुलुकको शासन–प्रशासनमा त्यस्ताहरुलाई नांगेझार पार्ने रवी र त्यसलाई लामो समय साथ दिएका शालिकरामक धेरैका लागि टाउको दुखाइ बनेकै थिए । अनुसन्धानको अर्को पाटो यो पनि बनाउने हो कि ?
तर, हामीले भुल्नु हुँदैन कि अनुसन्धानलाई भीडको बलले प्रभावित पार्न खोज्यौ भने त्यले मुलुकमा अराजकता जन्मिन्छ । यसकारण अहिलेलाई संयमता नै प्रमुख उपाय हो । अदालतको आदेश कुर्नु सबैको हितमा छ ।
सङ्क्रमण देखिएपछि कारागारका कैदीबन्दी र थुनुवा अन्यत्र सरुवा
अनलाइन कक्षालाई शैक्षिक सत्रमा गणना गर्ने गृहकार्य सुरु
हराइरहेका पत्रकार बलराम बानियाँको शव सिस्नेरीमा भेटियो
डोटी बस दुर्घटना : मृतक तीनजनाको सनाखत, ३३जना घाइते
सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको नतिजा निराशाजनक
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा बनाउन आग्रह
कोरोना संक्रमणको भयावह स्थिति : आठ दिनमा ३६ जनाको मृत्यु
छिमेकीमा सीमा अतिक्रमण गर्ने नीति र चिन्तन- स्थायी सुरक्षा संयन्त्र आवश्यक
हुलाकी राजमार्गको हविगत- लक्ष्य ३ सय ५० किमि कालोपत्र, भयो जम्मा १ सय ९२ किमी
बुधबार कोरोना संक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु, उपत्यकामा मात्रै पाँचजना
उपत्यकामा थपिए १ सय ३९ जना, देशभर थप ४ सय ८४ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
बुटवल कोरोना अस्पतालमा दुईजनाको मृत्यु
युवाहरुको अबको बाटो : क्रान्तिले थाकेका नेतालाई विदा, राष्ट्रको नेतृत्व लिने
सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस : युवा नीति कार्यन्वयनमा चुनौती
उखु किसान स्थानीय निकायमा दर्ता अनिवार्य र करको व्यवस्थाले उत्पादन घट्ने आशङ्का